YEYINTNGE(ကနဒေါ): ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ် ၏ပြောကြားချက်ကို သုံးသပ်တင်ပြခြင်း
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ် ၏ပြောကြားချက်ကို သုံးသပ်တင်ပြခြင်း
February 11, 2015 at 9:50pm
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ် ၏ပြောကြားချက်ကို သုံးသပ်တင်ပြခြင်း။
ဇန်နဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့က ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်ရဲ့ဆွေးနွေးခန်းမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ်က အောက်ပါ အတိုင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
“၆ ပွင့်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ တကယ်တန်းပြောရရင် (Dialogue culture) ဒိုင်ယာလော့ကယ်လချာ (ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှု - စာရေးသူမြန်မာပြန်ချက်) ကို လုပ်နေတာကို စိတ်ပါလက်ပါ အလုပ်နဲ့သက်သေပြနေတာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဘယ်အဆိုကိုမှ မပစ်ပယ်ဘူး၊ သို့သော် အဆိုတစ်ခုကို သွားတဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ ပြည့်စုံရမယ်။ ဒီကနေ့ အများကြီး ခေါ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ? အများကြီးခေါ်မှ လူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေ အများကြီးရမယ်၊ အဲဒီအဆိုပြုချက်တွေမှာ Key Players (Key Players = အဓိကခေါင်းဆောင်သူများ) တွေက အဲဒီအကြံပြုချက်တွေကို နားထောင်တဲ့အခါ အပေါ်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျဉ်းကျဉ်းသွားတဲ့အခါမှာ အချက်အလက် ပိုစုံမှာပေါ့။ အပေါ်မှာရှိတဲ့လူကပဲ တစ်ယောက်ချင်း အသိနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် တကယ်ကျတော့ အောက်မှာလုပ်တဲ့အခါ မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” ဟု ဦးရဲထွဋ် ပြောသွားသည်မှာ “သူတို့အစိုးရလုပ်တာမှန်တယ်အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိလုပ်တာပါ” ဟု ကာကွယ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးက အဓိကကျနေသောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၄ ပွင့်ဆိုင်တောင်းသည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဘာပြင်ဆင်ချိန်မှမပေးဘဲ ၁၄ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲကို အမေရိကန်သမ္မတ မရောက်ခင် ဗြုံးစားကြီး ခေါ်လိုက်သည့်အတွက် အဖိတ်ခံရသူများ ဖုတ်ပူမီးတိုက် သွားတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဆွေးနွေးပွဲဟု ကင်ပွန်း တပ်ထားသော်လည်း တစ်ယောက် ၁၀ မိနစ်ခန့် စကားပြောရသည့် လုပ်ပွဲအဖြစ် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။
ထိုဝေဖန်မှုများ ပြင်းထန်လာခြင်းနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကြံခိုင်ဖြိုးပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦး မှ ၆ ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံရေးကို အဆိုပြုပြီး အားလုံးက ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ၊ တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ ပါဝင်သည့် ၆ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးအတွက် ဆိုပြီး တိုက်တွန်းအတည်ပြုခဲ့သည့်အထဲတွင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအိုက်ပေါင်းနှင့် ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ (Arakan National Party) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ နှစ်ယောက်ကို လှို့ဝှက်မဲဖြင့် ရွေးချယ်စေခဲ့ရာ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နှင့် ရွေးချယ်လိုက်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဦးအိုက်ပေါင်း ၏ကျားဖြူပါတီသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တပြည်လုံးတွင် အမတ်အများဆုံး ရရှိခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်ကျားခေါင်းပါတီ ခေါင်းဆောင်ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့ပါတီ ပိတ်ပင်ခံထားရချိန် ၂၀၁၀ တွင် ဝင်ရောက် အရွေးခံခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်တွင် အမတ်များဆုံးရရှိသည့် ပါတီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကျားခေါင်းပါတီကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခွင့်ရသည့်အခါ ရှမ်းပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပူးပေါင်းရန်ကျားခေါင်းပါတီမှ အဆိုပြုမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည့် အတွက် သူ့ပါတီဝင်လွှတ်တော်အမတ်တချို့က ညီညွတ်ရေးလိုလားသည့် ကျားခေါင်းပါတီဖက်သို့ ကူးပြောင်း သွားခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ဦးအိုက်ပေါင်းသည် လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့်လည်း ပလဲနံပသင့်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို မရွေးချယ်ဘဲ ဦးအိုက်ပေါင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပါက အစိုးရမှ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးကို ပြုလုပ်ကောင်းပြုလုပ်လာနိုင်ပေသည်။ ဦးအိုက်ပေါင်းသည် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ပြိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ဦးခွန်ထွန်းဦးပါတီသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဦးအိုက်ပေါင်း၏ ကျားဖြူပါတီသည် ကြံခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့နှင့် မဟာမိတ်လုပ်ရန် တစ်လမ်းသာရှိသည့်အတွက် ဦးအိုက်ပေါင်းကို တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်တော်တွင် ရွေးချယ်လိုက်ပါက အစိုးရအနေနှင့် ၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်တည်းကို ချောင်ပိတ်ပြီး ၅း၁ ချိုးဖြင့် ထိန်းထား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဦးအိုက်ပေါင်း အရွေးမခံရဘဲ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်နှင့် တန်းတူညီမျှမှု၊ တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးကိုသာ ဇောင်းပေးလုပ်သင့်ပြီး လွှတ်တော်တွင် ပြည်သူများက ရွေးချယ်သူများသာ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် တက်ရောက်သင့်သည်ဟု ပြတ်သားစွာ တောင်းဆိုခဲ့သည့် ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ရွေးချယ်လိုက်သည့်အခါ ၆ ပွင့်ဆိုင်တွင် ဒေါ်စုနောက်တွင် ခိုင်မာသော မဟာမိတ် တစ်ဦးအနေဖြင့် ရှိနေခဲ့ပြီး သူတို့ချယ်လှယ်ချင်သလို မဖြစ်နိုင်ဘဲ ၄း၂ ဖြစ်နေခဲ့သည့်အတွက် ၆ပွင့်ဆိုင်မှာ အကောင်အထည်ပေါ်မလာခဲ့ဘဲ ဗျူဟာပြောင်းပြီး ၄၈ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုကိုဖန်တီး၍ စင်တင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၄ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရမည်ကို စိုးရွံ့နေသလို ဆွေးနွေးပွဲများတွင်လည်း သူ့လူများနှင့် မဟာမိတ်ပါတီဝင်များကို အများစုထည့်သွင်းထားပြီး အင်အားနှင့် ဒေါ်စု တောင်းဆိုခြင်းများကို ဖိအားပေးဆန့်ကျင်ထားရန်ပင် ဖြစ်နေသလောဟု တွေးထင်စရာရှိသည်။ လွှတ်တော်မှ ဒေါ်စု တောင်းဆိုထားသော ၄ ပွင့်ဆိုင်အစား ၆ ပွင့်ဆိုင်အတည်ပြုပေးမှုကို ဒေါ်စုကသဘောတူလက်ခံခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး စောထွန်းအောင်မြင့် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ၁၂ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးအဆိုကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်က ထောက်ခံမဲအများစုနှင့် ဒီဇင်ဘာ ၁ဝရက်နေ့က အတည်ပြု လိုက်ပြန်သည်။ ယင်းသို့ ၁၂ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပင်မလူမျိုး ခုနစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြမည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ဖြစ်နေရာမှအစိုးရက ရုတ်တရက် ၄၈ ပွင့်ဆိုင်ကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ကရင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး စောထွန်းအောင်မြင့် အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးများကိုပါ တက်ရောက်စေခဲ့သည်။
ထိုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကို လေ့လာလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် ပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အာမခံမည့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးမှာ ဆွေးနွေးပွဲခုံပေါ်သို့ မရောက်နိုင်ဘဲ ဖေါင်းပွလာသောဆွေးနွေးပွဲများဖြင့်သာ အနှစ်သာရမရှိဘဲ အချိန်ကုန်နေမည့်သဘော သက်ရောက်လျက် ရှိသည်။
ဦးရဲထွဋ်က “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာသည့်ယဉ်ကျေးမှုကို သမ္မတကြီးက စိတ်ပါလက်ပါ အလုပ်နှင့် သက်သေ ပြနေပါတယ်” ဟု ပြောပင်ပြောငြားသော်လည်း ထိုတွေ့ဆုံမှုတို့သည် သဘောတူညီချက်ရရှိရန်ထက် ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကို အထောက်အကူမပြုသည့် အချိန်ဆွဲရေးဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ် မြင်တွေ့နေရသည်။
ဦးရဲထွဋ်က “ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ဘယ်အဆိုကိုမှ မပစ်ပယ်ဘူး၊ သို့သော် အဆိုတစ်ခုကို သွားတဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ ပြည့်စုံရမယ်၊ ဒီကနေ့အများကြီးခေါ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ၊? အများကြီးခေါ်မှ လူတွေရဲ့ အကြံပြု ချက်တွေ အများကြီးရမယ်” ဟု ဆိုသည်၊
တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများသည် အစိုးရခန့်အမှုထမ်းများဖြစ်သည် ထိုသူများထံမှ အကြံဥဏ်များကို အစိုးရမှ ပြည်နယ်အလိုက် တောင်းခံလိုက်လျှင်ရသည်။ အဓိကလိုအပ်နေသည်မှာ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ ရိုးသားစွာ မိမိအာဏာတည်မြဲရေး၊ အာဏာရယူရေးအတွက်မစဉ်းစားဘဲ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကင်းသည့် မြန်မာ့ လူ့ဘောင်လောကကြီးကို မည်ကဲ့သို့ညီညီညွတ်ညွတ် ဖန်တီးကြမည်နည်းဟု တိုင်ပင်ဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး ပင်ဖြစ်သည်။၊ လူအများကြီးခေါ်ပြီး လူများစကားတွေဖောင်းပွပြီး လိုရင်းကိုရောက်မည် မဟုတ်သည်ကတော့ သေချာသည်။ ဆုံးဖြတ်နိုင်သောအင်အားရှိသော လူကြီးများဆွေးနွေးပွဲမှ ရလာသော သဘောတူညီချက်က သာတိုင်းပြည်အနာဂါတ်ကို တိုးတက်လာရန်ပြုလုပ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
အရာရာတွင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ထိပ်တွင်နေရာယူ၍ ဒီမိုကရေစီပေးပါမည်ဆိုသည်မှာ ယုံတမ်းစကားတခုလိုပင် ဖြစ်လျက်နေသေးသည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးလုံးသည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည်လည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လွတ်လပ် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေလိုလျှင် စစ်အာဏာရှင် အငွေ့အသက်မကင်းသော ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဟောင်းတစ်ဦးက ကြီးကြပ်ပေးရမည်ဆိုသည့် အနေအထားကို ပြောင်းသင့်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက် မမှားခဲ့ကြောင်းကို ကာကွယ် ပြောဆို သွားခဲ့ ခြင်းသည် အန္တရာယ် ကြီးသည်။ သူသည် ဘက်လိုက်မှုရှိသူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။ ထို့ကြောင့် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေချင်လျှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးတင်အေး နေရာတွင် လူရိုသေရှင်ရိုသေ သမာသမတ်ရှိသော အရပ်သား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို ပြောင်းလဲခန့်ထားဖို့လိုပေသည်။
ဦးရဲထွဋ်က “အဲဒီအဆိုပြုချက်တွေမှာ Key Players (အဓိက ခေါင်းဆောင်သူများ) တွေက အဲဒီ အကြံပြုချက်တွေကို နားထောင်တဲ့အခါ အပေါ်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျဉ်းကျဉ်းသွားတဲ့အခါမှာ အချက်အလက် ပိုစုံမှာပေါ့” ဟု ဆိုခဲ့သည်၊အမှန်တကယ်ဖြစ်နေသည်က အပေါ်သို့တဖြေးဖြေးကျဉ်းမသွားဘဲ ၄ ပွင့်မှ ၁၄ ပွင့် နောက်ဆုံး ၄၈ ပွင့်နှင့် တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ကျယ်လာခြင်းက ဦးရဲထွဋ်က အပြောနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကြောင်း သက်သေပြချက် တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
သူက “အပေါ်မှာရှိတဲ့လူကပဲ တယောက်ချင်း အသိနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် တကယ်ကျတော့ အောက်မှာ လုပ်တဲ့အခါ မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” ဆက်ပြောခဲ့သည်။ အပေါ်ကလူတွေက တစ်ယောက်ခြင်း အသိနဲ့ဆုံးဖြတ်နေခြင်းကြောင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါဟု ဒေါ်စုနှင့် ပြည်သူတွေက တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါဟုဆိုခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်သည် စုပေါင်းအဖြေရှာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အစိုးရထောက်ခံသူ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့်များ အများအပြား စားပွဲတွင်ဝင်ထိုင်ပြီး အစိုးရမင်းများ ပြောသမျှကို ထောက်ခံနေခြင်းဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်မလာနိုင်ပေ။ ရလာဒ်ကောင်းများလည်း မရရှိနိုင်ပေ။
ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်မှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်၍ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို လက်တွန့်မနေဘဲ ရဲရဲတွေ့ဆုံပြီး တပ်မတော်နှင့် အတိုက်အခံတို့ သဘောတူညီချက်ရရန် သမ္မတမှ ကမကထပြု၍ တိုင်းပြည်ရေရှည်အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပေသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုသည်မှာ မိမိလိုလားချက်များကို တရားသေ ဆုတ်ကိုင်ထား၍ မရဘဲ အလျော့အတင်း ရှိမှသာ အောင်မြင်မည်ကို သိထားခြင်းသည် ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ခြင်း၏ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သလို နှစ်ဖက်လုံး အောင်ပန်းပန်ဆင်နိုင်သော အခြေအနေ (Win-Win situation) လည်းဖြစ်ပေမည်။